Madaafiic Lagu Garaacay Xarunta Madaxtooyada Muqdisho. – Calamada.com
Madaafiic Lagu Garaacay Xarunta Madaxtooyada Muqdisho.
Tiro madaafiic ah ayaa fiidkii hore ee caawa waxaa lagu garaacay xarunta madaxtooyada dowlada ridada federaalka ee Villa Somali’iyadoona dhawaaqa madaafiicda si aad ah looga maqlayay xaafadaha magaalada Muqdisho.
Ilaa iyo todoba madfac ayaa la xaqiijiyay iney ku dhaceen gudaha madaxtooyada’waxaana sidoo kale jiro tiro kale oo ku dhacday hareeraha iyo xaafadaha ku dhaw dhisamaha madaxtooyada.
Si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha nafeet iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay madaafiicda caawa lagu garaacay dhismaha madaxtooyada’iyadoona maalmo ka hor ay aheed markii xilli maalin cad tiro madaafiic ah lagu garaacay xarunta madaxtooyada.
Dhanka kale weerar bam ayaa lagu qaaday saldhiga deegaanka Kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho’iyadoona warar hoose ay sheegayaan iney jiraan khasaara nafeet oo maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka kasoo gaartay weerarka bam.
Previous: Diyaaradaha Mareykanka Oo Duqeyn Ka Geystay Qeybo Ka Mid Ah Gobalka Xalab.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Andalus 30-06-1437 Hijri.